FXAdept EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာFXAdept EA ၏FXAdept EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် FXAdept EA ၏ 1
စျေးနှုန်း: $ 269 (၁ လိုင်စင်၊ အခမဲ့မွမ်းမံမှုများနှင့်ပံ့ပိုးမှု)
FXAdept EA ၏ သုံးသပ်ချက် - အကောင်းဆုံး Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး Metatrader4များအတွက်
FXAdept EA ၏ တစ်ဦးအကျိုးရှိ၏ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး သင်တစ်ဦးစတိုင်အနိမ့်အန္တရာယ်နှင့်ပိုမိုလုံခြုံလမ်းအတွက်ပိုက်ဆံအကြီးပမာဏဝင်ငွေဖို့အခွင့်အလမ်းပေးနိုင်ရန်အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနှင့်ထူးခြားသော FX ထရေးဒင်းစနစ်။
ဤ Forex စက်ရုပ် အများအပြားစျေးကွက်ခေါင်းဆောင်တီထွင်မှုပါရှိသည်။ FX အစွမ်း EA ၏တစ်မူထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်ရှိပါတယ် လစဉ်လတိုင်းတည်ငြိမ်သောအမြတ်အစွန်းရဖို့နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာမှ Martingale မပါဘဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
အဲဒီနှစ်ခုကိုအခြေခံ algorithms များကအောင်မြင်နေသည် ဒီ Forex စက်ရုပ်များအတွက်အထူးဖွံ့ဖြိုးခဲ့ကြသည်:
အမိန့် Feature ကို၏ smart ပံ့ပိုးမှု
FXAdept EA ၏ ရိုးရှင်းစွာအရှိဆုံးအဆင့်မြင့်ဖြစ်ပါသည် FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး available to the public. This Forex EA is special because it's designed from the ground-up to be self-teaching. It's computer code usesasophisticated neural programming algorithm that allows it to study past data and teach itself how to adapt.
ဤ FXAdept EA ၏ အပေါ်အလုပ်ဖြစ်တယ် USDJPY currency pair. It's profitable at every brokerage who offers Metatrader4(MT4) accounts, but it makes the most profit at FXOpen.
နိမ့်ဆုံးအကြံပြုသိုက် $ 100 ကနေစတင်ကြောင်းနှင့်သြဇာမဆိုရှိနိုင်ပါသည်။ သင်ဤအတွက်အကောင်းဆုံး setting များကိုရှာဖွေနိုင်သည် Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး သင့်တပ်ဆင်ပြီးသို့မဟုတ်သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်သူတို့ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။
ဤ FXAdept EA ၏ သင်အောင်မြင်မြင်ချင်သူကိုကုန်သည်တွေကနေဖှံ့ဖွိုးတိုးပါ!
FXAdept EA ၏ - Forex Trading နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သည်မဟုတ်လော
၏အသုံးပြုမှုကို Make FXAdept EA ၏ နှင့်ရွှေသို့သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဖွင့်!
FXAdept EA ၏ - Forex Trading စက်ရုပ်အကြောင်းမကြားရဘူးလား။
မည်သည့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲလွယ်ကူသောပိုက်ဆံဘာသည် FXAdept EA ၏ အားလုံးအကြောင်းပါ။ ဒါဟာသင်ပြန်ထိုင်အနားယူနှင့်ရိုးရိုးလေး FX ထရေးဒင်းစက်ရုပ်ဟာသူ့ရဲ့လှည့်ကွက်ပြုပါစောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ automated Forex မဟာဗျူဟာနှင့်ပရိုဂရမ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစနစ်ဖြစ်ပါသည်။ အ parameters တွေကို, အကြေးခွံနှင့်သင်တို့၏ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာ၏ကန့်သတ်သင်တို့အနားမှာထောက်ပံ့ခဲ့ကြပြီးနောက်, စက်ရုပ်ကျော်ကြာမြင့်ခြင်းနှင့်သင်တို့အဘို့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာအပေါငျးတို့သကိုင်တွယ်။ ဒီအဖြစ်ကိုကောင်းစွာအခြားအရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များပေါ်တွင်သင်၏စွမ်းအင်အာရုံစိုက်နေချိန်တွင်ထိန်းချုပ်မှုယူရန်သင့်အားခွင့်ပြုထားသည်။
အဆိုပါ FXAdept EA ၏ အမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်ခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေ 24 /5ပေါ်နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကျန်ရှိနေပါတယ်။ သင်ကကို turn off မဟုတ်လျှင်ဒီတော့သင်ကတစ်ခုတည်းအကျိုးအမြတ်ကုန်သွယ်မှုလက်လွတ်မည်မဟုတ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုလူသားတွေအတွက်အမတူဘဲ FXAdept EA ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုများကငျးမဲ့သည်နှင့်သာလုံးဝ Calculator ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးစွယ်-of-the-ယခုအချိန်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချကြလိမ့်မည် တကယ်တော့ကအချက်အလက်များနဲ့ကိန်းဂဏန်းများ compile ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိတော့မည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုလမျး၌အရမသွားပါစေလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။
FXAdept EA - ကုန်သွယ်ရေးယုတ္တိဗေဒ၊ တည်ဆောက်ပုံနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များအကြောင်း
FXAdept EA ၏ အချို့သောနာရီအတွင်းအရောင်းအ, လာမယ့်စုံတွဲနာရီသို့မဟုတ်နေ့ရက်ကာလအဘို့စျေးနှုန်းညှနျကွားခပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးဆုံးဖြတ်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အန္တရာယ်များနှင့်နှစ်လိုဖွယ်အမြတ်အစွန်းနှင့်အတူကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ အဆိုပါကုန်သွယ်မှုစနစ်ကြီးမြတ်အမြတ်အစွန်းရရှိမညျနှင့်နေ့တိုင်းအရောင်းအဖွင့်လှစ်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, ဒီ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး အများအပြား features တွေပါရှိသည်။ အဆိုပါ Forex EA ၏ Martingale မသုံးပါဘူး။ စနစ်ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစေသည်နှင့်သေးငယ်တဲ့သြဇာနှင့်သိုက်သုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုပေးသည်အချို့ကိစ္စများတွင်။
ဤသည် FX စက်ရုပ်ကယုံကြည်စိတ်ချရသောစေသည်နှင့်မည်သည့်ပွဲစားအပေါ်အညီအမျှကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဦးရေပြား, မသုံးပါဘူး။ အမိန့်အများအားဖြင့်နာရီကိုအနည်းဆုံးစုံတွဲတစ်တွဲများအတွက် FX ဈေးကွက်ထဲမှာတည်းခိုကြသည်နှင့် 100 pips (4-ဂဏန်း) အထိ TakeProfit ပါပြီ။
အဆိုပါ FXAdept EA ၏ အမိန့်ဇယားကွက်၏နိယာမကိုမသုံးပါဘူး။ ဒါကကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးပု Market ကဖြစ်နိုင်ချေ drawdown မှုကိုလျော့နည်းစေသောလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အတွက်ရွှေ့ဖို့အတှကျအစောင့်အမိန့်ကိုစုဆောင်းမထားဘူးဆိုလိုသည်။
FXAdept EA - Entry Point ၏အသွင်အပြင်
အဆိုပါ developer များ၏ FXAdept EA ၏ ကျနော်တို့အဓိကလမ်းကြောင်းသစ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်စျေးကွက်၏ညှနျကွားထဲမှာအမြဲတမ်းကုန်သွယ်မှုဖွင့်လှစ်ပေးသောအားဖြင့်တစ်ဦးမျှမျှတတတိကျမှုပုံစံတွေ့ပြီ။ ကြောင်းငါတို့သည် RSI ညွှန်ပြချက်သုံးပါ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ non-စံလမ်းထဲမှာကိုအသုံးပြုပါ။
ကျနော်တို့စျေးနှုန်း RSI ညွှန်ပြချက်၏နယ်နိမိတ်၏စင်္ကြံအတွင်း၌အခါ, RSI အဆိုအရရှည်လျားပြားချပ်ချပ်ကာလကိုရှာဖွေ, သူတို့၏ပြိုကွဲမှာကျနော်တို့ကလမ်းကြောင်းသစ်စတင်နားလည်ပါသည်။ ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသည့်အပြင်အဆင်များနှင့်အပိုဆောင်းထားသော filters ကိုလမ်းကြောင်းသစ်၏ညှနျကွားအတွက်မြင့်မားသောဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူအမြတ်အစွန်းအရောင်းအဖွင့်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။
FXAdept EA - Orders Feature ကိုစမတ်ပံ့ပိုးမှု
ပွင့်လင်းလွတ်လပ်စွာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားများ၏ထောက်ခံမှုများစွာဖွံ့ဖြိုးပြီး algorithm ကိုကျနော်တို့အမြတ်အစွန်းအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်နှင့်ပိတ်ပွဲအရောင်း၏ညှနျကွားမှန်းဆသောအခါကျွန်တော်တို့ကိုအများဆုံးဖြစ်ပွားမှုများတွင်အကျယ်ချဲ့အမြတ်အစွန်းရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါ့အပြင်စျေးကွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာသာအတွက်မရွှေ့ပါဘူးသောအခါ, entry ကိုအမှတ်တစ်မှားယွင်းသောချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှိပေလိမ့်မည်။
ဤအမှုကိစ္စများတွင် FXAdept EA's အမိန့်များစမတ်ထောက်ခံမှု feature, နိမ့်ဆုံးအရှုံး / breakeven သို့မဟုတ်ပင်အမြတ်အစွန်းအတွက်အချို့ကိစ္စများတွင်အတူကုန်သွယ်ပိတ်ဖို့ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ : အမိန့်များ၏စမတ်ထောက်ခံမှုထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ကဲ့သို့သော parameters တွေကိုယူ feature
စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှု (တည်ငြိမ်မှု) ၏လုပ်ဆောင်ချက်
FXAdept EA ၏ လစဉ်လတိုင်းအကြီးရလဒ်များကိုရှိပါတယ်။ default settings ကိုအလွန်အမင်းအန္တရာယ်အပါအဝင်အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Forex EA ၏အဘို့အလိုနိမ့်ဆုံးသိုက်တွေအများကြီး 100 သုံးပြီး $ 0.01 ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကအနည်းဆုံး $ 400 တစ်သိုက်အကြံပြုပါသည်။
ပေါ်လစီပြန်အမ်း: အဆိုပါရောင်းချသူ 30 ရက်အတွင်းအပြည့်အဝပိုက်ဆံပြန်အာမခံချက်ပေးပါသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ပါတယ်အတိုင်းဤကုန်သွယ် software ကိုလုပ်ဆောင်မပါဘူးဆိုရင်, သင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံပြန်ရလိမ့်မယ်။ သင့်အကောင့်ရဲ့ချိန်ခွင်လျှာအတွက် drawdown 35% ထက်ပိုပါကလည်းတစ်ပြန်အမ်းငွေကိုသင်ထောက်ခံအုကူံပ settings ကိုအသုံးပြုအခြေအနေပေါ်တွင်ချက်ချင်းစတင်ပါလိမ့်မည်။
FXAdept EA ၏ မယုံနိုင်စရာစျေးနှုန်း, ဆိုလိုသည်မှာသာ $ 269 မှာချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိတ္တူဖမ်းပြီးမှမစောင့်ကြဘူး!
အဆိုပါတရားဝင် FXAdept EA ၏ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
နေ့စွဲ Start: နိုဝင်ဘာလ 15, 2017
နေ့စွဲ Start: မေလ 6, 2019
ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ဇွန်လ 2018
FXADEPT EA ၏ - METATRADER4အသစ် Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး performance UPDATE ထုတ်ပြန်ခဲ့သော: + 13.5% MONTHLY Return (အစစ်အမှန် TRADING ACCOUNT ကို!) ချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်, သတင်း! FXAdept EA ၏ - ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ Metatrader4အကျိုးအမြတ်ရ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး (MT4) ဒီနေရာမှာပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆုကြေးငွေရယူပါ: https://www.bestforexeas.com/fxadept-ea-review/ FXAdept EA ၏တစ်အမြတ်အစွန်း Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးများနှင့်မတူထူးခြား FX ထရေးဒင်းစနစ်ဖြစ်ပါသည် သင်တစ်ဦးစတိုင်အနိမ့်အန္တရာယ်နှင့်ပိုမိုလုံခြုံလမ်းအတွက်ပိုက်ဆံအကြီးပမာဏဝင်ငွေဖို့အခွင့်အလမ်းပေးနိုင်ရန်အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များကဖန်တီးခဲ့သည်။ ဤသည် Forex စက်ရုပ်အများအပြားစျေးကွက်ခေါင်းဆောင်တီထွင်မှုပါရှိသည်။ FX အစွမ်း EA ၏တစ်ဦးရရှိရန်ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်ရှိပါတယ်... ဆက္ဖတ္ရန္